Paositra sy fifandraisan-davitra : Voatendry ho sekretera Jeneralin’ny minisitera i Briand Andrianirina -
AccueilSongandinaPaositra sy fifandraisan-davitra : Voatendry ho sekretera Jeneralin’ny minisitera i Briand Andrianirina
Paositra sy fifandraisan-davitra : Voatendry ho sekretera Jeneralin’ny minisitera i Briand Andrianirina
Hatramin’ny nitsanganan’ny governemanta Ntsay Christian, dia mitohy hatrany ireo fanendrena mpiasam-panjakana ambony. Omaly, nandritra ny filankevitry ny minisitra teny Iavoloha dia notendrena ho sekretera Jeneralin’ny minisiteran’ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra i Briand Andrianirina. Toerana izay manana ny lanjana eo amin’ny lafiny ara-teknika, indrindra ao anatin’ny fiboroboroan’ny teknolojia sy ny lafiny nomerika.
Tsy olom-baovao eo amin’io sehatra io ny sekretera Jeneraly vaovao. Efa manana traikefa amin’io lafiny io rahateo izy, satria nandritra ny 10 taona dia efa nitana ny toeran’ny Tale Jeneralin’ny sampana momba ny fanatontosanana ny « e-gouvernance » (ANRE), izay sampandraharaha miankina amin’ny fiadidian’ ny repoblika izy. Anisan’ireo dingana lehibe vitany ny famoahana ny ANRE tao anatin’ny fahasahiranana ara-bola ka nahafahan’izany sehatra izany nanohy ny fitantanana ny tranonkalan’ny raharaham-panjakana teo ambany fiahiany noho ny fifandraisana nananany tao anatin’ny sehatry ny fifandraisan-davitra sy ny teknolojia vaovao.